Ny kinova Fedora an'ny Firefox dia efa misy fanohanana ny fanafainganana ny famoahana video amin'ny alàlan'ny VA-API | Avy amin'ny Linux
Ilay mpihazona fonosana Firefox ho an'i Fedora dia nanambara izany Vonona ny hampiasa ny fanafainganana ny fitaovana ankehitriny ho an'ny famahana ny horonantsary Firefox ao amin'ny Fedora mampiasa ny VA-API, satria ny haingam-pandeha mandraka ankehitriny dia tany amin'ny tontolo mifototra amin'ny Wayland ihany no niasa, satria ny fanohanan'ny Chromium VA-API dia napetraka tao Fedora tamin'ny taon-dasa.
Ity dia nanampy ny fanamafisana ny fitaovana amin'ny famoahana video amin'ny Firefox dia vita tamin'ny alàlan'ny backend Wayland vaovao, izay mampiasa ny rafitra DMABUF hisarihana ny firafitra sy handaminana ny fifanakalozana buffer amin'ireo firafitra ireo amin'ny alàlan'ny fizotrany samihafa.
Eny, tonga ihany izy amin'ny farany. Herintaona sy tapany taorian'ny nanampian'ny Tom Callaway Engineering Manager @ Red Hat ny patch ho an'ny Chromium, dia mahazo playback video haingana ho an'ny Firefox ihany koa izahay. Mahamenatra ny ela loatra nefa mbola mianatra ihany aho.
Ny fanohanan'ny VA-API ao amin'ny Firefox dia somary voafaritra tsara, satria izy io dia miasa ao Wayland ihany amin'izao fotoana izao. Tsy misy antony ara-teknika amin'izany, tsy ampy ny fotoana anaovako azy amin'ny X11, ka ny lesoka 1619523 dia miandry hackers be herim-po.
Jonas Ådahl (Red Hat) dia nanampy ahy tamin'ny backland Wayland hatramin'ny patch Wayland voalohany efa-taona lasa izay.
Ao amin'ny Fedora 32 sy Fedora 31, ny kinova vaovao an'ny Firefox 77 dia ahitana ny backend vaovao amin'ny alàlan'ny default rehefa mandeha amin'ny session database GNOME any Wayland, fa kosa mba hahafahan'ny hardware mandingana ny famoahana video dia misy fonosana fanampiny koa takiana izay tsy maintsy apetraka amin'ny rafitra: ffmpeg, libva ary libva-utils RPM Fusion repository, natambatra niaraka tamin'ny fanohanan'ny VA-API.
Amin'ny rafitra misy karatra sary Intel, fanafainganana miasa amin'ny mpamily mpamily libva-intel ihany (ny mpamily libva-intel-hybrid mbola tsy tohanana).
Ho an'ny AMD GPU, miasa ny haingam-pandeha raha manana tranomboky mahazatra radeonsi_drv_video.so ianao, izay ampahany amin'ny fonosana mesa-dri-mpamily. Ho an'ny karatra sary NVIDIA, mbola tsy nampiharina ny fanohanana. Raha te hanombatombana ny mifanentana amin'ny mpamily VA-API dia azonao atao ny mampiasa ny utilityfofofo.
Raha voamarina ny fanohanana, ahafahana manafaingana ny Firefox, amin'ny pejy "about: config", tsy maintsy apetrakao ny variables "gfx.webrender.enabled" sy "widget.wayland-dmabuf-vaapi.enabled" marina.
Aorian'ny famerenana amin'ny laoniny ny tranokala dia tokony hojerenao ny fampidirana WebRender sy ilay backend vaovao (Wayland / drm) eo amin'ny pejy momba: fanohanana.
Aorian'izany dia mila mahazo antoka ny mpampiasa fa ampiasaina ny VA-API hanafainganana ny fampisehoana horonantsary (mety misy olana mifanentana amin'ireo codecs, habe amin'ny horonan-tsary ary famakiam-boky), izay ahafahan'ny maody debug amin'ny alàlan'ny fanombohana ny Firefox amin'ny tontolo MOZ_LOG miovaova ary mijery ny fisian'ny «fahombiazan'ny VA-API FFmpeg init.
MOZ_LOG = "PlatformDecoderModule: 5" MOZ_ENABLE_WAYLAND = firefox 1
Ny fampiasana ny haingam-pandeha rehefa mijery YouTube dia miankina amin'ny fomba nanodinkodina ilay sarimihetsika (H.264, AV1, sns.).
Azonao atao ny mahita ny endrika ao amin'ny menio afindrafindra-tsindrio havanana ao amin'ny fizarana "Statistics for Nerds". Raha te hisafidy ny endrika tohanan'ny rafitry ny famoahana sary mihetsika video dia azonao atao ny mampiasa ny plugin h264ify nohatsaraina.
Misaraka, fonosana misy Firefox 77.0 ho an'ny Fedora dia misy patch fanampiny izay misy fiatraikany amin'ny fahombiazana sy ny fitoniana, izay tsy eo amin'ny fananganana Mozilla's standard Firefox 77.0. Ny fampidirana ireo patch ireo amin'ny rafitra lehibe dia tsy andrasana afa-tsy ao amin'ny Firefox 78.0 (ireo mpampiasa dia afaka mampiasa ny kinova beta an'ny Firefox 78 na ny fananganana isan'alina avy any Mozilla amin'ny alàlan'ny fanombohana ny fitetezana miaraka amin'ny baiko "MOZ_ENABLE_WAYLAND = 1 ./fireoks").
Ary koa, Mozilla dia manangana ampiasao tranomboky libvpx namboarina izay tsy manohana ny VA-API ho an'ny decoding VP8 / VP9; raha ilaina ny fanafainganana an'ny VP8 / VP9 decoding, libvpx tsy maintsy kilemaina amin'ny alàlan'ny fametrahana ny "media.ffvpx.enabled" miovaova amin'ny "about: config" diso "(libvpx dia efa kilemaina ao anaty fonosana avy amin'ny trano fitehirizana Fedora).
Ary farany, raha te hahalala bebe kokoa momba izany ianao dia afaka manatona ny fanamarihana tany am-boalohany ao amin'ny tranonkala ofisialin'ny Martin Stransky.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Ny kinova Firefox ho an'ny Fedora dia efa misy fanohanana hanafainganana ny famoahana video amin'ny alàlan'ny VA-API
SEGA dia te-hamerina ireo masininy Arcade eo amin'ireo "you-fogs"